NextMapping | Nkuzi ndi ntanetị
Mbido / online ọmụmụ
Research jikọtara ọdịnihu nke nyocha ọrụ na ihe bara uru ma dị mfe iji mejuputa atụmatụ. Nhọrọ anyị dị n'ịntanetị gụnyere ọmụmụ mmụta onwe onye ma ọ bụ nchịkwa nchịkwa maka mmeri na mmejuputa mmejuputa iwu.
Uzo ohuru nke ndi oru choro ka ha meputa
Anyị na-ebi ma na-arụ ọrụ n’oge a na-enwetụbeghị ụdị ya. Ọrịa ọjọọ agbanweela ndụ na azụmaahịa ruo mgbe ebighị ebi. Kedu ka ị ga - esi nọrọ na ihu nke mgbanwe na ndakasị ọgbụgba n'ọgbọ ọhụrụ a? Ọdịnihu na-akpọ maka ndị mmadụ n'otu n'otu ka ha nwee ike na ihe ọhụụ karịa ugbu a.
Ọdịnihu nke ihe ịga nke ọma nke ọrụ agaghị adabere na otu ma ọ bụ abụọ 'ndị dike' na azụmahịa. Mụta ihe kpatara ọdịnihu bụ ihe niile gbasara 'anyị' yana otu esi emepụta omenala nke ihe ọhụrụ dị njikere maka mgbanwe.
Tinye akwụkwọ ugbu a maka 50%
Otu esi ede ma na ejigide talent dị elu ugbu a na ọdịnihu ọrụ
Otu isi nsogbu chere azụmaahịa ugbu a bụ ịchọta ya na idobe ezigbo mmadụ. Eziokwu bụ na ụzọ ochie nke ikenye ọrụ, ịnara ọrụ na ọrụ na-ele anya na ndị mmadụ ga-anọgidesi ike na-arụ ọrụ.
Uzo esi abu onye ndu mgbanwe na eme ka ndi otu ume
Onye ndu mgbanwe na-elekwasị anya na mgbanwe nke ọdịbendị. Enwere ndị ndu ọdịnala 4 bụ nke m ga-ewepụta oge na mmemme a.
Ekekọrịta Ọdịnihu - Otu esi emepụta Omenala Ọrụ Ọchịchị Ekekọrịta
Ikekọrịta Nduzi bụ omenaala. Enwere ebumnuche na-emekọrịta ihe, ịza ajụjụ na nnabata ndị ọzọ. Ọ bụ ọdịbendị nke ịdị nkọ, ihe ọhụrụ na imekọ ihe ọnụ. Were ya dị ka otu ụdị dị elu nke ịmekọ ihe ọnụ.
Etu aga - eweta VS Ijikwa mgbanwe iji mepụta Ọdịnihu nke ọrụ
Gbanwee nkà iduzi dị mkpa maka ọrụ dịpụrụ adịpụ na ebe ọrụ na-agbanwe ngwa ngwa.
Etu ị ga - esi duga n ’ọdịnihu nke ọrụ - Inwe ma ọ bụ na - enweghị aha
Ọdịnihu nke ọrụ dị ugbu a! A na - ekekọrịta ọdịnihu ma chọọ onye ọ bụla ka ọ wulite ikike iduzi dị mkpa n'agbanyeghị aha ya.
Ihe Omume Akwukwo Nso nke emere ka onwe gi ghazie na ndaputa oru
To nweta asambodo ihe omumu ihe omuma banyere ihe omumu
Nweta iji ngwaọrụ ọ bụla 24 / 7 365 Days otu afọ
Ọnụahịa ahọrọla na n'ihu usoro ntinye akara maka Live NextMapping s Ihe omume
Aga-elele nyocha izizi ka itinye maka nkuzi NextMapping exclusive
Tonweta pọdkastị Webinars dị ọkụ na ihe omume ọ bụla dị n'ịntanetị
Nnweta na ndị ọkachamara n’ụwa niile Ajụjụ ọnụ na onyinye pụrụ iche ha
Mpempe akwụkwọ ndebiri n'efu, "Onye isi Nduzi na Igwe Ọdụdọ"
Enweghị njedebe na ọdịnaya niile dị ugbu a na ihe ọhụrụ maka ọnwa 6!
Enwere ike ibudata akwụkwọ ntụgharị
Onye nkuzi ọkachamara nke aka gị họpụtara ma kenye gị oge ọrụ gị
3 Otu Ihe Nkuzi Ndi Mmadu n’otu n’egwuregwu n’oge obula
Onwe ya na ngwa ọrụ nke ọdịnaya ahụ; ndị na-enye ọzụzụ ga-atụle ọnọdụ gị pụrụ iche
Ibu ụzọ debanye aha maka usoro mmụta ọhụrụ n'ịntanetị maka ọrụ ọrụ n'ọdịnihu
Nweta weblinks akwụkwọ na-atụ aro akwụkwọ ọkachamara na ọtụtụ ndị ọzọ
Achọpụtara m na nke a bụ nnukwu ihe omume maka ndị mmadụ n'ogo ọ bụla nwere, ọ bụghị naanị ndị nọ n'ọchịchị ọdịnala ha. ”
Zụta ihe ọmụmụ maka ndị otu gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye ọzụzụ otu ntanetị maka ndị otu niile nke 20 ma ọ bụ karịa ma ọ bụ na ịchọrọ ikwu banyere ịkọwapụta agụmakwụkwọ dị ọcha maka ụlọ ọrụ gị.
Obi ga-adị anyị ụtọ ịgwa gị okwu maka ịnye ọnụahịa kachasị mma.
Kpọtụrụ anyị gbasara ịnye ọnụahịa
Na-eduga na isi ihu
Na-agba ume, na-akọ ihe, na-emekọ ihe ma hazie gị mkpa gị.
Otu ọzụzụ nkuzi on-one na-iru n’ihu gi n’ihu.
Nzuzo di omimi na nyocha iji bulite ahia gi.
Ọziri ahaziri iche iji zụlite ọgụgụ ndị isi gị na ndị otu gị mkpa.